Marqaan News Agency » TOP NEWS+DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland Booqashadii uu ku Tagay Qandala iyo Xaalada Layaab leh+Hub Lagu Soo Bandhigay
Jan 10, 2017 - 4 Jawaabood
Cabdi Weli Gaas Puntland iyo Daarood oo dhan hankoodii ayuu god ku riday. Waxaa lagu xantaa in uu yahay ninka oogu aqoon sarreeya inta madax Daarood ah ee dalka joogta oo weliba uu shahaadada ugu sarreysa ku haystaa maaddada oogu muhiimsan ee dhaqaalaha.
Osman Awad waa assibtay! iyagoon Soomalida kale xummaan uqaadayn haddana uma muuqato waxa a haystaan. Taasna waxaan ugu wacan rag wata damac siyaasadeed iyo dan shaqsiyadeed oo aan cidna meel gaarsiinayn.
Kuwii dowladihii rayidka ahaa ku jiray ayagaa ugu horreeyay inay dhulkooda ka guuraan xidhiidhkana u jaraan bixiyayna magacyada ay ka midyihiin Gaadhi waa!! Maxamed Siyaad Daaroodna wuu la dagaalamay dhulka uu kasoo jeedaana maanta waa ka ugu dibu dhacsan Somaaliya!
Abdullahi Allah ha u naxariistee wuxuu sameeyay tanaasulaad badan oo maanta caqabad ku ah reer Puntland si uu isagu dantiisa madanimo u gaadho. Inaga Gaas jidkaas buu hayaa.
Takale ee beeshaan waxaa ilaahay ku ibtileeyay raadin Soomaalinimo oo aan cid kale rabin. Kuwii kafantooda tolayay bay kabahooda tolayaan. Addeerrayaaloow iyadoon lays xumamynayn “Geel jire geela wuu wada jirtaa waanu kala jirtaa” Soomaaliya waa la wada leeyahay waana lakala leeyahay ee reerku dhulkooda ha horumarsadaan.
Suldaan Cismaan Cawad